Neymar oo ku dhawaaday inuu Ooyo mar uu ka hadlayay Lionel Messi…!!!+SAWIRRO – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Juventus. ee horyaalka Serie A oo la shaaciyey
Neymar oo ku dhawaaday inuu Ooyo mar uu ka hadlayay Lionel Messi…!!!+SAWIRRO
(Europe) 26 Feb 2019. Xiddiga ugu qaalisan kubbada cagta adduunka ee Neymar ayaa ku dhawaaday inuu Ooyo/ilmeeyo mar uu ka hadlayay xiriirka saaxibtinimo ee gaarka ah ee kala dhaxeeyay Lionel Messi berigii ay wada joogeen Barcelona.
Laacibka reer Brazil ayaa 2017-dii Nou Camp uga soo tagay lacago rikoodh ah 198 milyan oo bound, Messi ayaana dhawaan daaha ka rogay inuu jeclaan lahaa inay dib u midoobaan saaxiibkii hore ee Neymar.
Neymar ayaa ku raaxeystay xiririir saaxiibinimo oo dhow uu la lahaa xiddiga reer Argentina afar sano oo ay wada joogeen Barcelona kaddib markii uu 2013-kii uga soo biiray kooxda ka dhisan dalkiisa hooyo ee Santos.
Hal sano oo koob la’aan ah ay wada qaateen kaddib ayay labada laacib ku wada guuleysteen koobbab Saddexleey ah kal ciyaareedkii 2014-15 iyagoona sameeyay mid ka mid ah wareerarkii ugu wacnaa ciyaaraha iyadoo uu wehlinayo Luis Suarez.
Wareysi uu Neymar siyay Esporte Espetacular ayuu ku dhawaaday inuu ooyo mar uu daaha ka rogay taageerada uu markasta siin jiray Messi berigii ay Spain wada joogeen.
“Sheekadan qof kasta ayaan u sheegaa, waqti aan baahida ugu badan u qabay qof i caawisa, Ninka ku jira kooxda, kan ugu fiican adduunka ayaa ii yimid oo isiyay Jaceyl.” Neymar oo ka hadlaya Messi ayaa sidaa yiri.
Waxaa weli socda qiyaas fikradeed Neymar la xiriirineysa inuu dib ugu soo laabanayo La Liga, laacibka garabka weerarka ka ciyaara ayaana qiirooday mar uu ka hadlayay codsiga Messi ee ah inuu dib ugu soo laabto Barcelona.
“Way adag tahay, Way adag tahay, inaad daacad noqoto aad ayay u adag tahay maxaa yeelay Lionel Messi wuxuu ii ahaa qof gaar ii ah.
Neymar oo sii wata hadalkiisa qiirada leh ayaaa sheegay in Markii ugu horreysay uu kooxda soo cago dhigtay uu u yimid Messi isla markaana uu ku yiri:
“Waxaan halkaan u joogaa inaan ku caawiyo”, Wuxuu kaloo kala taliyay inuu cidna ka cabsan isla markaana uusan xishoon.
Goolhaye Kepa oo Dhibaato wayn ka dhex abuuray Chelsea...(Xidigaha Kooxda oo Labo saf u kala jabay)
Goorma ayaa xilka laga qaadayaa tababaraha kooxda Chelsea Maurizio Sarri?